၂၀၁၉ နှစ်သစ်ကူးနေကြစဉ် ( ရန်ကုန်-မြန်မာနိုင်ငံ) ဇန်နဝါရီ ၁-၂၀၁၉။
၂၀၁၉ နှစ်သစ်အတွက် အနုပညာရှင်တချို့ရဲ့ နှစ်သစ်ဆုတောင်းများကို ဗွီအိုအေက စုစည်း တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စွယ်စုံရအနုပညာရှင် ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေ၊ မိုးလေဝသပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း ထူထောင်သူနဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူ၊ စာရေးဆရာမ မသီတာ (စမ်းချောင်း)၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် လူမင်း၊ Miss Universe Myanmar 2018 နှင်းသွေးယုအောင်၊ အဆိုတော် X Box ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ယွန်းယွန်း၊ အဆိုတော် ဟဲလေးနဲ့ သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းတို့က ဗွီအိုအေပရိသတ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် နှစ်သစ်ဆုတောင်းစကားများ ပြောထားပါတယ်။
" ၂၀၁၉ ခုနှစ် မင်္ဂလာနှစ်သစ်နဲ့အညီပေါ့လေ ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်း မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ တိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေ။ မင်္ဂလာအခါသမများနဲ့ ကြုံကြိုက်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ ကျနော် ဝင်းဖေပါ။"
"ကျမ်းမာတော်မူကြပါစခင်ဗျာ။ ဒီနှစ် ၂၀၁၈ခုနှစ်အကုန်ကနေ ၂၀၁၉ခု နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းကြတဲ့အခါမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း စတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မင်္ဂလာသတင်းတခု မျှဝေပေးစရာရှိပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ငါးနှစ်၊ အနှစ်၂၀ ကာလလောက်ကတည်းက ကမ္ဘာမှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဒဏ် အဆိုးဝါးဆုံး ခံရတဲ့ နိုင်ငံ ၁၀နိုင်ငံ ရွေးချယ်ပြီးတော့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒုတိယအဆိုးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်လာခဲ့တာ ၂၀၀၁၇ခုနှစ်အထိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၈ခုနှစ် ရောက်လာတဲ့အခါမတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒုတိယ အဆိုးဆုံးနိုင်ငံကနေပြီး တတိယ အဆိုးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် တဆင့်ပိုမိုပြီးတော့ ကောင်းတဲ့ဘက်ကို မြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတိုးတက်မှုဟာ အားရကျေနပ်ဖွယ်ရာ မဟုတ်သေးပေမဲ့လို့ ဘာပဲပြောပြော ကောင်းမွန်တဲ့အရွေ့တခုလို့တော့ သတ်မှတ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ လုပ်စရာအလုပ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ ပညာနဲ့တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်သစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ အထူးသဖြင့် လူငယ်များ ကျောင်းသားများ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရများအားလုံးဟာ ပညာနဲ့တည်ဆောက်တဲ့ နိုင်ငံတခုအဖြစ် အောင်မြင်စွာ ကူးပြောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ နှစ်သစ်မင်္ဂလာဆုတောင်းအနေနဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ အားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ"
နာရေးကူညီမှုအသင်း ထူထောင်သူလည်းဖြစ် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်သူကလည်း ငြိမ်းချမ်းတဲ့နှစ်သစ်ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
" New Year ပေါ့လေ အင်္ဂလိပ်လို New Year. ဒီ New Year မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒီ့တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ အတ္တတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံး သီလလုံခြုံစွာနဲ့အငြိမ်းချမ်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်ရမယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငြိမ်းချမ်းစွာတဲ့အဆင့်ပြီးရင် ကိုယ့်မိသားစု ဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ့်မိသားစုငြိမ်းချမ်းရင် ကိုယ့်ရပ်ရွာငြိမ်းချမ်းမယ် ကိုယ့်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းမယ်။ ဒီလိုငြိမ်းချမ်းမှုတွေကတဆင့် တကမ္ဘာလုံး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကမ္ဘာကြီးကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားရပါမယ်။"
စာရေးဆရာမ မသီတာစမ်းချောင်းကလည်း လွတ်လပ်တဲ့စာပေတွေ ပေါ်ထွန်းဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
"၂၀၁၉လို့ ဆိုလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်လို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ တခြားတပါးသူက ပေးအပ်မှ ရနိုင်တဲ့ ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ အာမခံချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါ တခြားတပါးသူဆိုတဲ့နေရာမှာ အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာမခံချက်ပေးနိုင်မယ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဟာ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကို အားပေးတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်စေချင်တယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရလည်း အာမခံချက်ရှိတဲ့ ဥပဒေတွေ ပေါ်လာစေ့ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တဘက်မှာလည်း ကျမတို့ စာရေးဆရာတွေ ကိုယ်နှိုက်က စပြီးတော့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေက အစပေါ့ လွတ်လပ်စေချင်တယ်။ ကျန်တဲ့ မလျှော်ညီတဲ့ မလိုလောဘမျိုးတွေ တခြား မလိုအပ်ပဲနဲ့ ပေါက်ကွဲတဲ့ ဒေါသမျိုးတွေ စသဖြင့် အဲ့လိုဟာတွေ ကင်းစင်ပြီးတော့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ကိုယ်နှိုက်ကိုက ပြောရိုးပြောစဉ် ပြောရရင်တော့ ဒီ Box ထဲက မတွေးတော့ပဲနဲ့ဥခွံလေးထဲကနေ မတွေးတော့ပဲနဲ့ ဥခွံကိုပစ်ပယ်ပြီးတော့ ပကတိလွတ်လပ်တဲ့စာပေလက်ရာ ဖန်တီးမှုမျိုးကိုလည်း ကျမ အင်မတန်ကို မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာ ကျမတို့နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၉မှာတော့ စာပေလောကသားတွေအပါအဝင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ကျင့်သုံး ခွင့်ရှိသူတွေ အားလုံး လူသားအားလုံးပေါ့လေ လူသားအားလုံးဟာ ရသစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အင်မတန်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့အတူ ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ။ ကိုယ့်ကိုတိုင်ကလည်း တန်ဖိုးထားနိုင်အောင်လို့ လေ့လာ အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ ဒီလူတွေ အားလုံး ရှင်သန်ရာ ဒီအမိမြေကလည်း ဒီလူတွေ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် လွတ်လပ်စွာ အနုပညာဖန်တီးခွင့်တွေကို အာမခံပေးနိုင်ပါစေ။ လုံခြုံစွာနဲ့ ဖန်တီးခံစားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။"
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လူမင်းကလည်း နှစ်သစ်ကူးဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါတယ်။
" အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ အခုလာမယ့် ၂၀၁၉ မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ကျမ်းမာချမ်းသာလို့ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။"
Miss Universe Myanmar 2018 နှင်းသွေးယုအောင်
" အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျမကတော့ Miss Universe Myanmar 2018 နှင်းသွေးယုအောင်​ ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၂၀၁၉ နှစ်သစ်အကူးအပြောင်းမှာ အန္တရာယ်ရှင်းဘေးကင်းစွာနဲ့ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုနိုင်ကြပါစေ။ ၂၀၁၉ နှစ်သစ်မှာလည်း စီးပွားလာဘ်လာဘတွေ လူမှုရေး အချစ်ရေး စီးပွားရေးတွေ မိသားစုရေးတွေ အားလုံး တိုးတက်ပြီးတော့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်။"
အဆိုတော် X Box ကတော့ နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ် ကိုယ်သစ်နဲ့ ဖြတ်သန်းဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
" ၂၀၁၉မှာ ကျနော့်ပရိတ်သတ်တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်း လူတိုင်း လူတိုင်း ၂၀၁၈မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ အမှားတွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ ၂၀၁၉မှာ အားလုံး လူသားအားလုံး သတ္တဝါအားလုံး အတွက် အကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ကျနော် ဆုတောင်းပါတယ်။"
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ယွန်းယွန်းကလည်း ပရိတ်သတ်တွေအတွက် နှစ်သစ်ဆုတောင်းပါတယ်။
" နှစ်သစ်မှာ ပရိတ်သတ်တွေ အကုန်လုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့ နောက်ပြီးတော့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေ အားလုံးလည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ရှင့်။"
အဆိုတော်ဟဲလေးနဲ့ သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းတို့ကလည်း ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။
"နှစ်သစ်ကနေစပြီးတော့ ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံးဒီ့ထက်ပိုပြီးတော့ ကျမ်းမာလန်းဖြာပြီးတော့ အစစအရာရာ မှည့်ပါစေပေါ့။"
"ဟုတ်ကဲ့ပါ. လာမယ့် ၂၀၁၉မှာ ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံး လိုရာဆန္ဒတွေ ပြည့်ကြပါစေ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး စီးပွားလာဘ်လာဘတွေလည်း တိုးပါစေလို့ နန်းမြတ်က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်။ နန်းမြတ်အတွက် အကြီးမားဆုံး မျှော်လင့်ချက်ကတော့ နန်းမြတ် သားလေး မွေးဖြစ်မှာပါဒါကတော့ နန်းမြတ်အတွက် အကြီးမားဆုံး မျှော်လင့်ချက်ပါ အဲ့တာလေးရယ် ပြီးသွားရင်တော့ နန်းမြတ် အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့တာကြောင့် နန်းမြတ်ရဲ့ အနုပညာတွေကို ဆက်လက်အားပေးပေးပါ လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်း နန်းမြတ်ကို ဝေဖန်ပေးပါလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အားပေးတဲ့အတွက်လေ။ "